Miezaka manadio tena hatrany ny minisiteran’ny fiarovam-pirenena. Tsy efa endrika manambara fa tsy voafehy ny miaramila ve izao ? Raha any amin’ny tany mandroso dia efa tokony hametra-pialàna ny lehiben’izy ireo satria efa tsy henoin’ny olona baikoiny intsony.
Misesy ny fitoriana olona mpampiasa an-trano zaza tsy ampy taona. Anisan’ny fitsarana izay nitranga tao Antsirabe omaly ny fisian’ny zaza izay nidoboka am-ponja rehefa nendrikendrehan’ny mpampiasa azy ho nangalatra. Niditra an-tsehatra anefa ny fikambanana iraisam-pirenena maro ary lasa nivadika any amin’ilay mpampiasa ny rihitra. Olana tamin’ity tranga ity ny tsy fahafantaran’ny ray aman-drenin’ilay ankizy akory fa MD ny zanany izay nalefa niasa.
Tsy nanaiky ny mpitarika fiangonana iray avy any Andranovory raha tsy niakatra teto an-drenivohitra ary nampahalala ny lehiben’ny zandary mahakasika ny tranga vono olona iray. Izany dia noho ny fahitana zazavavy 12 taona maty tao anaty saha ary feno ratra ny vatany ary goaka ny fivaviany, toy ny taova nesorina. Mpiasa an-trano izy io ary vitavita mora fotsiny ny raharaha rehefa nanome vola ny mpampiasa taorian’ny fahafatesan’ilay zaza.
Efa herinandro izay dia tsikaritra fa tena mihatra ny fanasaziana ireo sarety tsy manara-dalàna eto an-drenivohitra. Am-polony ireo sarety notazonin'ny polisy etsy Anosy amin'ny andro atoandro noho ny tsy fanajana ora. Mbola hihamafy hatrany io sazy io ho an'ireo sarety izay minia tsy manaraka ny fandaminana raha ny fanazavan’ny CUA.
SAZY FANAIRANA IREO TAKSIBE
Tsy afaka miasa mandritry ny telo andro. Izay aloha ny sazy fanairana natao tamin’ny taksibe am-polony tsy nanara-dalàna. Zotra D 17 izy ireo ary tsy afaka miasa miaraka amin’ny fiara ny mpamiliny sy ny mpanampy. Nisy koa ireo izay miisa 32 nosintomina ny « licence » ary tsy afa-mihetsika mandritry ny 10 andro. Ao anatin’ity hetsika ity ihany dia nisy fiara fitaterana efatra izay tsy navela hiasa intsony ary nosintonina hatramin’ny « permis » an’ny mpamiliny. Arahi-maso tanteraka ny zotra D ankehitriny.
Mivaona tanteraka ny ankamaroan’ny tanora ao Toamasina noho ny fitsindronana « héroïne ». Soa fa mba sarona ny mpanaparitaka an’izany ao an-toerana ary nidoboka am-ponja. Nino ny anarany ary ato ho ato ny fitsarana azy raha araka ny vaovao avy any an-toerana. Lasa jiolahy ireo zatovo noho ny tsy fananana vola kanefa mila mitsindrona isan’andro. Mitohy hatrany ny fikarohana izay mety ho naman’i Nino.
TSY MBOLA HITA POPOKA ILAY MPAMILY
Hatramin’izao dia tsy hita izay nanjavonan’ilay taksibe nahafaty olona maromaro tetsy amin’ny Bypass. Tsy misy koa ny fitoriana izay mipetraka satria mbola samy repotra ao anatin’ny fikarakarana ny fandevenana ny havan’ny maty. Mora loatra ho an’ny mpamily mamo sy mahafaty olona ny mitsoaka amin’ny alina ary tsy hahitana taratra akory izay momba azy ireo. Mila hamafisina ny fanaraha-maso ny fiara mivezivezy eto amintsika.